नेताको दशैं कस्तो ? कुन नेताले दशैंमा के गर्दैछन् ? | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more नेताको दशैं कस्तो ? कुन नेताले दशैंमा के गर्दैछन् ?
नेताको दशैं कस्तो ? कुन नेताले दशैंमा के गर्दैछन् ?
अशोज १९ गते, २०७६ - ०९:०९
गणेश पाण्डे, काठमाडौं । नेपालीहरुको महान चाड दशैंतिहार घरआगनमा आइसकेको छ । काम र अध्ययनको सिलसिलामा देश विदेश गएका आम नागरिकहरु पनि आ–आफ्ना घर फर्किने क्रम जारी छ । कोही फर्किसेका छन् । कर्मचारी, प्रशासक, निजामती लगायतका सरकारी तथा निजि क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु विदाको ताँजोपाँजो मिलाउँदै छन् । अहिले दशैंतिहारको माहोल शहरबाट गाउँघरतिर बाक्लिदै गएको छ ।
आपसी भाइचारा, भातृत्व विकास, हर्षउल्लास र एक अर्काको सुखदुःख साटासाट गर्ने चाडको रुपमा दशैं र तिहारलाई लिइन्छ ।
वर्षभरीको राजनीतिक दौडधुपले थकित भएका उच्च तहका नेताहरु दशैतिहारको विदालाई परिवार, आफन्त, नातेदारसँग भेटघाट रमाइलो माहोलकोरुपमा सदुपयोग गर्दै आएका छन् । दशैंको आगमनसँगै संसदको बर्खे अधिवेशन समाप्त पछि नेताहरु विस्तारै ‘रि फ्रेस मोड’मा देखिन्थे । तर, सभामुख कृष्णबहादुर महरा संसद सचिवालयको एक कर्मचारीसँग यौन दुराचारको आरोप लागेपछि एकाएक राजनीतिक माहोल तातिएको छ । महराले सभामुखको पदबाट राजिनामा दिइसकेका छन् । विकसित घटनाक्रमलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा नेताहरु आन्तरिक छलफल र भेटघाटमा व्यस्त छन् ।
दशैंको विदामा समेत संसदमा सभामुख चयनको विषयलाई लिएर नेताहरु आन्तरिक छलफलमा व्यस्त हुने देखिन्छ । यस बाहेक दशैंको विदामा कुनकुन नेताले के गर्दै छन् ? यसमा सबैको चासो हुन सक्छ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यसपालिको दशैंमा काठमाडौं उपत्यकामा रहेका देवीको विभिन्न शक्ति पीठको दर्शन गरी विताउने योजना रहेको छ । दशैंमा खासै राजनीतिक भेटघाट तथा कार्यक्रम नहुने भएकोले राष्ट्रपति भवन सितल निवासमा आफन्त, नातेदारसंग बसेर दशैं मनाउने योजना रहेको सूचना सहयोगी श्रीधर गौतमले जानकारी दिए । यस पटक भीआइपी र सर्वसाधारणलाई राष्ट्रपतिबाट टिका लगाउने कुनै निर्णय नभएको समेत गौतमले जानकारी दिए । तर, राष्ट्रपतिको हातबाट टिका लगाउन इच्छुक भीआइपी, राष्ट्रसेवक, सर्वसाधारणलाई भने भण्डारी टिका लगाइदिने गौतमले बताए ।
नन्दबहादुर पुन, उप–राष्ट्रपति
उपराष्ट्रपति नन्दबाहादुर पुन यस बर्षको दशैं उपराष्ट्रपतिको निवासमै मनाउँने भएका छन् । दशैंमा परिवारसँग बसेर टिकाटाला गरी मनाउने उपराष्ट्रपतिका छोरा दिपेश पुनले बताएका छन् । टिकाको दिन उपराष्ट्रपतिले आफन्त, नातेदारसँग भेटघाटमा समय विताउने बाहेक अन्य नयाँ कुनै योजना नबनेको पुनको भनाइ छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी निवास बालुवाटरमा दशैं मनाउने भएका छन् । यस पटक दशैं मनाउन उनको निजि निवास बालकोट नजाने भएका हुन् । प्रधानमन्त्री निवासमै ओलीले बुवा मोहनप्रसाद ओलीको हातबाट टिका ग्रहण गर्नुहुने प्रमुख स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारीले जानकारी दिएका छन् । यस बाहेक ओली आफन्त, नातेदार तथा शुभचिन्तकसँग बसेर दशैं मनाउने छन् ।
डाक्टर रामबरण यादव, पूर्वराष्ट्रपति
पूर्वराष्ट्रपति रामबरण यादबले दशैंमा निजि निवास धनुषा नजाने भएका छन् । सरकारले उपलब्ध गराएको ललितपुरको बागडोलमा रहेको निवासमै शुभचिन्तक, आफन्त तथा नातेदारसँग यादवले दशैं मनाउने छोरा चन्द्रमोहन यादवले जानकारी दिए ।
पूष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड), अध्यक्ष नेकपा
नेकपाका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) यस पटक दशैंको टिका नलगाउने भएका छन् । प्रचण्ड पहिलेदेखिनै दर्शैंको टिका लगाउने गरेका छैन् । परिवारका अन्य सदस्यहरुले टिका लगाएपनि छोरा प्रकास र श्रीमति सिता दाहालको आग्रहमा ०७४ सालमा एक पटक लगाएका थिए । छोराको मृत्यु पश्चात अध्यक्ष दाहालले दशैंं मानउने गरेका छैन । दशैंको अवधिमा दाहाल निवास खुमलटारमै रहने । र, किताब पढेर फूर्सदको सदुपयोग गर्ने मुडमा दाहाल रहेको छोरी गंगा दाहालले जनकारी दिइन् ।
माधब कुमार नेपाल, नेता नेकपा
पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपा नेता माधब कुमार नेपाल ठुलो बुवाको छोराको हातबाट टिका लगाइ यसपालि दशैं मनाउने सोचमा रहेका छन् । दशैंमा रौतहट नगइ कोटेश्वर निवासमै परिवारसँग दशैं मनाउने उनका सहयोगीले बताएका छन् ।
झलनाथ खनाल, बरिष्ठ नेता, नेकपा
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल आफ्नै निवास डल्लु आवसमा परिवार तथा कार्यकर्ताबीच दशैं मनाउने छन् । शुभचिन्तक, पार्टी कार्यकर्तासँग बसेर रमाइलो गर्ने मुडमा खनाल रहेको उनका सहायोगीले बताएका छन् ।
शेरबहादुर देउवा, सभापति नेपाली काँग्रेस
नेपाली काँग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवा आफ्नै निवास बुढानिलकण्ठमा दशैं मानाउँने छन् । दशैंको अवसरमा कतै जाने योजना नभएको पारिवारीक सदस्यसँग बसेर दशैं मनाउने देउवाका सहयोगी भानु देउवाले बताएका छन् ।
डाक्टर बाबुराम भट्टराई, नेता समाजवादी पार्टी
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर बाबुराम भट्टराई यस पटक पूख्र्यौली घर नजाने भएका छन् । परिवारसँगै भट्टराई निवास टोखामा दशैं मनाउने उनका सहगोगी रोशन पोखरेलले जानकारी दिएका छन् । दशैं आफ्नै निवासमा मनाएपनि बुवाको हातको टिका लगाउन कोटेश्वर आउने छन् । बाँकी समय अध्ययनमा सदुपयोग गर्ने बाहेक कुनै खास योजना नभएको सहयोगी पोखरेलले बताए ।
रामचन्द्र पौडेल, नेता नेपाली काँग्रेस
नेपाली काँग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल आफ्नै निवास बोहरा टारमा पारिवारीक सदस्यहरुसँग बसेर दशैं मनाउने योजना रहेको पौडेलका सहयोगी चिरञ्जीवी ढुंगानले जानकारी दिएका छन् ।
दशैंको मुखमा संसद सचिवालयको एक महिला कर्मचारीमाथि यौन दुराचार आरोप लागेपछि पद त्यागेका कृष्णबहादुर महरा यतिबेला तनाबमा छन् । नेपाको इतिहाँसमै उच्च ओहदाका व्यक्तिमाथि गम्भिर आरोप लागेसँगै महराको राजनीतिक उचाइनै समाप्त हुने स्थिति छ । निकै तनाव झेलिरहेका महरा दशैंको बारेमा केही नसोचिएको उनका निकट सहयोगीले बताएका छन् ।
अशोज १९ गते, २०७६ - ०९:०९ मा प्रकाशित